DHEGEYSO-Shacabka Galkacyo oo kahadlay heshiiskii dhexmaray Puntland iyo Galmudug. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Shacabka Galkacyo oo kahadlay heshiiskii dhexmaray Puntland iyo Galmudug.
Nofeembar 3, 2016 4:26 b 0
Galkacyp, Novb 03 2016-Shacabka Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa waxa ay soo dhaweeyeen Heshiiska Puntland iyo Galmudug ku dhexmaray Magaalada Dubai ee Dalka Imaaraadka Carabta, kaas oo looga hadlayay Dagaalka Gaalkacyo.
Shacabka oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan Heshiiskii Magaalada Gaalkacyo ay ku kala saxiixdeen Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed.
DHEGEYSO-Horyaalka heerka 1aad ee Puntland oo bilaabanaya.